Ubuntu dia manamboatra lesoka fiarovana telo amin'ny kernel farany | ubunlog
Izay mpampiasa Ubuntu antonony rehetra dia mahafantatra fa mamoaka dikan-teny vaovao amin'ny rafitra fiasan-dry zareo isaky ny enim-bolana, fa isaky ny roa taona dia misy dikan-teny LTS, ary mety haharitra ela ny fanavaozana ny kernel. Raha ny marina, rehefa manao izany izy dia manao izany amin'ny dikan-teny LTS raha tsy manaraka dingana vitsivitsy toy ny ao amin'ny ity lahatsoratra ity momba ny fomba hitazonana azy ao amin'ny Focal Fossa. Ny marina dia ny kernel dia nohavaozina, fa mba hanampiana patch fiarovana toy ny nataony tamin'ny dikan-teny rehetra Ubuntu izay tohana ankehitriny.
Ora vitsy lasa izay, namoaka ny Canonical tatitra USN telo, manokana ny USN-5443-1, USN-5442-1 y USN-5444-1. Ny voalohany amin'izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny dikan-teny Ubuntu rehetra izay mbola tohanana, dia ny Ubuntu 22.04 navoaka vao haingana, ny hany dikan-teny tsy tohanan'ny LTS, izay 21.10, ary avy eo 18.04 sy 16.04, izay tohana ankehitriny noho ny fidirana amin'ny dingana ESM. , izay mamela azy hanohy handray patch fiarovana.
Ubuntu dia manavao ny kernel ho fiarovana
Ao amin'ny famaritana ny USN-5443-1 dia mamaky tsy fahombiazana roa isika:
(1) Ny fandaharam-potoanan'ny tambazotran'ny kernel Linux sy ny subsystème filaharana dia tsy nanao fanisana reference araka ny tokony ho izy tamin'ny toe-javatra sasany, nitarika ho amin'ny vulnerable tsy misy fampiasana. Ny mpanafika eo an-toerana dia afaka mampiasa izany mba hahatonga ny fandavana ny serivisy (fianjeran'ny rafitra) na hampiharana kaody tsy misy dikany. (2) Ny kernel Linux dia tsy nampihatra araka ny tokony ho izy ny fameperana seccom amin'ny toe-javatra sasany. Ny mpanafika eo an-toerana dia afaka mampiasa izany mba hialana amin'ny fameperana seccom sandbox.
Momba ny USN-5442-1, izay misy fiantraikany amin'ny 20.04 sy 18.04 ihany, bibikely telo hafa:
(1) Ny subsistema Network Queuing and Scheduling an'ny kernel Linux dia tsy nanao fanisana references tamin'ny toe-javatra sasany, nitarika ho amin'ny vulnerable tsy misy fampiasana. Ny mpanafika eo an-toerana dia afaka mampiasa izany mba hahatonga ny fandavana ny serivisy (fianjeran'ny rafitra) na hampiharana kaody tsy misy dikany. (2) Ny subsystème io_uring an'ny kernel Linux dia nahitana fihoaram-pefy integer. Ny mpanafika eo an-toerana dia afaka mampiasa azy io mba hahatonga ny fandavana ny serivisy (fianjeran'ny rafitra) na hampiharana kaody tsy misy dikany. (3) Ny kernel Linux dia tsy nampihatra araka ny tokony ho izy ny fameperana seccom amin'ny toe-javatra sasany. Ny mpanafika eo an-toerana dia afaka mampiasa izany mba hialana amin'ny fameperana seccom sandbox.
Ary momba ny USN-5444-1, izay misy fiantraikany amin'ny Ubuntu 22.04 sy 20.04;
Ny subsystem Network Queuing and Scheduling an'ny kernel Linux dia tsy nanao fanisana reference araka ny tokony ho izy tamin'ny toe-javatra sasany, nitarika ho amin'ny vulnerable tsy misy fampiasana. Ny mpanafika eo an-toerana dia afaka mampiasa izany mba hahatonga ny fandavana ny serivisy (fianjeran'ny rafitra) na hampiharana kaody tsy misy dikany.
Mba hialana amin'ireo olana rehetra ireo, ny hany zavatra tokony hatao dia ny fanavaozana ny kernel, ary azo atao izany fanavaozana ho azy miaraka amin'ny fitaovana fanavaozana amin'ny tsiro ofisialy rehetra an'ny Ubuntu. Tsarovy indray fa mendrika ny havaozina tsara foana ny rafitra fandidiana, farafaharatsiny miaraka amin'ny patch fiarovana farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » General » Linux » Ubuntu dia manamboatra lesoka fiarovana telo amin'ny fanavaozana kernel farany
DuckDuckGo dia mikarakara ny fiainanao manokana... rehefa ilaina izany